I-Beaver, uphawu lweCanada | Ukuhamba kwe-Absolut
Ngokusho kwe- Umthetho Kazwelonke Wezimpawu ZaseCanada, umthetho wamenyezelwa ngo-1975, kuyaqashelwa futhi kumenyezelwe ukuthi i-beaver (UCastor canadensis) uthanda uphawu lobukhosi be Canada.
Le rodent enobungane, eyakha ngokungakhathali yamadamu emifuleni nasemachibini aseNyakatho Melika, ingenye yezinhlobo ezivelele ezweni. Futhi futhi omunye wabathandwa kakhulu. Le yindaba yakhe nobudlelwano bakhe obukhethekile neCanada:
El UCastor canadensis yaziwa nangokuthi i- I-beaver yaseMelika. I-European Beaver iyahlukaniswa (I-Castor fiber) ngenxa yobukhulu bayo obukhudlwana nokuma komsila wayo, obanzi kakhulu futhi othambile.
Kulinganiselwa ukuthi kunezigidi eziyi-10-15 zalezi zilwane emazweni aseNyakatho Melika. Iningi lisatshalaliswa phakathi kwe- I-United States neCanada, yize kunjalo nakwamanye amaphuzu asenyakatho ye Mexico Naphezu kokuzingelwa ngobuningi amashumi eminyaka (uboya bayo buhlonishwa kakhulu), akubhekwa njengezilwane ezisengozini.
1 I-Beaver emlandweni waseCanada
2 I-Polar Bear, uphawu olusha lweCanada?
I-Beaver emlandweni waseCanada
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani i-beaver ingenye yezilwane abantu baseCanada abakhomba kakhulu kuzo. Empeleni, lesi silwane sikhona kwabaningi ukubonakaliswa kwamasiko yezwe futhi, ngandlela thile, kuye kwaba njalo protagonist yendaba yakhe.
Kakade ezikhathini zamakoloni, kusukela ngekhulu leshumi nesikhombisa, i ukuhweba ngoboya (futhi phakathi kwabo leyo ye-beaver) ibinokubaluleka okukhulu kwi ukuthuthukiswa kwezomnotho, ezenhlalo nezombusazwe eCanada. Imikhankaso yezentengiselwano yokufuna ama-furs yayikuthanda ukuhlola izindawo ezinkulu ezingaziwa futhi yakhuthaza izindawo eziningi zokuhlala abantu.
Como i-anecdote yalesi sikhathi esingokomlando, kufanele kuqashelwe ukuthi uMbhishobhi waseQuebec ucele usizo lweSonto LamaKatolika ukuthola ukuthi ngabe udle inyama ye-beaver NgoLwesihlanu ngeLente. Odokotela baseVatican banquma ukuthi yebo. Isizathu kwaba ukuthi, ngokwemithetho yokudla, le gundane, elichitha impilo yalo yonke emanzini, lingathathwa njengenhlanzi.
I-beaver ivezwe ngemuva kwezinhlamvu zemali zaseCanada ezinamasenti ama-5 isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka
Kamuva, ngo-1849, izethulo zama-beavers zahlobisa izitembu zalelizwe ngokokuqala ngqá. Ngisho nanamuhla isithombe sakhe sivela ku-nickel.
Kukhona ama-beavers ezihlangu ezisemthethweni zezifundazwe zase EManitoba, e-Alberta y Saskatchewan, kanye nasemzini wase Toronto; Futhi i-beaver iyi-mascot yezinye izinhlaka zezempi zezwe ezifana nalezi ze Onjiniyela Bezempi BaseCanada nesifanekiselo Inkampani yase Hudson's Bay. I-beaver iphinde yavela isikhathi eside ku-logo ye AbaseCanada, elinye lamaphephandaba okuqala ezweni.
Futhi akumelwe sikhohlwe ukuthi i-beaver enobungane ebizwa ngegama Amik (igama elithi ngolimi lwesi-Algonquian elisho i-beaver) kwakuyisilwane esikhethiwe se- Ama-Olimpiki aseMontreal e 1976.
Ngazo zonke lezi zingxabano, Ungakuphika kanjani ukuthi i-beaver inesilwane sayo sesizwe saseCanada? Okusobala kuwo wonke umuntu ekugcineni kwaba semthethweni ngo-1975 nge Umthetho Kazwelonke Wezimpawu ZaseCanada eshiwo ekuqaleni kokuthunyelwe.
I-Polar Bear, uphawu olusha lweCanada?
Kodwa-ke, i-beaver akuyona ukuphela kwesilwane esingathathwa njengesobala iCanada. Kukhona abanye abazama ukuphikisana nalolo dumo: abanye abahlala ehlathini abanjengo i-moose futhi i squirrel, noma izilwane ezijwayelekile ezilwaneni zase-arctic njenge umkhomo we-beluga, the puffin noma i Ibhele elihlala kwiqhwa.
Ibhere lasePolar, ozongena esikhundleni se-beaver njengophawu lweCanada
Phakathi kwabo bonke, kuphela Ibhele elihlala kwiqhwa ikwazile ukuphikisana nesihloko esithi "uphawu lwezilwane lwaseCanada" oluthiwa yi-beaver ngokuziqhenya okukhulu. Yize kungenzeka ukuthi abazi, bobabili bancintisana ezinhliziyweni zabantu baseCanada.
Amabhere amhlophe amakhulu (nawo avela kohlamvu lwemali, kulokhu imali engu- $ 2) isabalele ezweni lonke. Bahlala ezingxenyeni ezisenyakatho zeLabrador neNewfoundland, iManitoba, iQuebec, kanye ne-Ontario. Yilapho kanye lapho i- IPolar Bear Provincial Park, osebeni lwe-Hudson Bay futhi ongenakufinyeleleka ngokuphelele ngomgwaqo.
Ngabe iPolar Bear izophumelela ukususa iBeaver njengesilwane esingokomfanekiso saseCanada? Eminyakeni embalwa eyedlule, i-senator UNicole eaton Wenze isicelo esinamandla kozakwabo ngevoti labo lokwenza iPolar Bear isilwane sikazwelonke. Akenelisekanga ngalokho, waqunga isibindi wathuka umabhebhana, ambiza "Igundane elinamaphutha amazinyo". Esikhundleni salokho, uncome ibhere elimhlophe, elinikezwe uchungechunge lwezimfanelo (amandla, isibindi, ubuhlakani kanye nesithunzi) okuthi ngokusho kwale senator kuzomenza afanelekele ukuba wuphawu oluphelele lwaseCanada.
Ngosuku lwayo lesi siphakamiso senqatshwa, yize kunabantu abaningi ezweni abazibophezele ekwenzeni ibhere elimhlophe (isilwane, ngokungafani ne-beaver, esisongelwa ngokuqothulwa) uphawu olusha lweCanada.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » I-Beaver, isilwane sesizwe saseCanada